Manchester City oo qorsheeneysa inay kula dagaalanto kooxda Barcelona heshiiska Griezmann – Gool FM
Manchester City oo qorsheeneysa inay kula dagaalanto kooxda Barcelona heshiiska Griezmann
Dajiye May 17, 2019
(England) 17 Maajo 2019. Ma jiro maalmahan war kaga muhiimsan saxaafada arinta ku aadan mustaqbalka xidiga reer France ee Antoine Griezmann, kaddib markii uu si rasmi ah u shaaciyay inuu ka tagayo kooxda Atletico Madrid.
Laakiin Antoine Griezmann ayaan wali magacaabin kooxda uu doonayo in heshiis cusub uu u saxiixo, iyadoo ay jiraan kooxo dhoowr ah ee xiiseenaya adeegiisa ay ka mid yihiin Barcelona iyo PSG.
Hadaba wargeyska Isbaanishka ah ee “Mundo Deportivo” ayaa daabacay warbixin uu ka soo xigtay “Manchester Evening News” ee ah in Manchester City ay qeyb ka tahay kooxaha xiiseenaya adeega Griezmann xagaagan.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in macalinka reer Spain ee Pep Guardiola uu kula taliyay maamulka kooxda Manchester City inay bixiyaan qiimaha lagu kansali karo heshiiska Antoine Griezmann ee gaarsiisan 200 milyan euro ilaa 120 milyan euro, laga bilaabo bisha July ee soo aadan.
Manchester City ayaa ku jirta liiska kooxo ay ka mid yihiin Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Juventus iyo Manchester United, laakiin Barcelona ayaa weli ah kooxda ugu dhow ee laacibkan sida laga helayo dhowr ilo wareedyo.
Marka Guardiola uu doonayo inuu la saxiixdo ciyaaryahan gaar ah, waxaa jira labo sababood oo ka danbeeysa inuu talaabadan qaado, tan koowaad ayaa ah inay jirto boos uu doonayo inuu xoojiyo ama tayo ahaan uu sare u qaado, halka arinta labaad ay tahay inuu doonayo in kooxda uu ka fasaxo mid ka mid ah ciyaartoyda isla markaana uu keeno ciyaaryahan cusub ee ku habboon falsafadiisa.